सोमवार, जेष्ठ ३०, २०७९
नेपालमा नयाँ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी थपिएको छ । सस्तोमा गुणस्तरिय सेवा दिने गरि वाइ फाई नेपाल आँउदो बुधबारदेखि बजारमा आउन लागेको हो । कम्पनीले ३० र ५० एमबीपीएसको गतिको इन्टरनेट प्याकेज सहित बजारमा आउन लागेको हो । यो मूल्य हाल चलेका इन्टरनेटको तुलनामा केहि सस्तो हो ।
हाललाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सेवा सुरु हुने र त्यसपछि विभिन्न चरणमा देशभर सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले योजना बनाएको छ । ३० एमबीपीएस प्याकेजको इन्टरनेट भ्याट बाहेक मासिक चार सय रुपैयाँ र ५० एमबीपीएस स्पिड प्याकेजको इन्टरनेट मासिक शुल्क ५५० रुपैयाँमै उपलब्ध हुनेछ । यो प्याकेज नेपालमा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा सस्तो प्याकेज भएको कम्पनीको दाबी छ ।
दुवै प्याकेजको लागि कम्पनीले अनलाइन बुकिङ खुला गरिसकेको छ । जडानको काम बुधबारदेखि सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। ३० एमबीपीएस इन्टरनेट जडान गर्ने उपभोक्ताले एक महिनाको शुल्क चार सय रुपैयाँ सहित एक हजार ५ सय रुपैयाँ राउटर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, ५० एमबीपीएस इन्टरनेट प्याकेज लिने उपभोक्ताले जडान गर्दा एक महिनाको शुल्क ५ सय ५० रुपैयाँसहित एक हजार ५ सय रुपैयाँ राउटर शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
नास्टले बनायो एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय स्कुटर, कति पर्छ मूल्य ?
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कसले भन्यो कबाडी ? महावीर पुनले दिए दरो झापड !
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, iphone मा (i) को अर्थ के होला ?
रकेट अन्तरिक्षमा अनियन्त्रित, चन्द्रमामा दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो
फाइभजी सपोर्टसहित एप्पलको सस्तो आईफोन सार्वजनिक हुँदै